Fanerana mpiasa an-trano
Eny amoron-dalana indray izao no atao « agence »
Maro tokoa amin’izao fotoana ny manao fitadiavam’bola amin’ny fanerana mpiasa an-trano. Tsy hiresaka ireny « agence de placement » lehibe na ireo mpametraka olona hiasa an-trano toy ny mankany Liban na ny any Bahamas… isika fa ireo agence tafo-lanitra no asiana teny kely. Tsy fantatra moa na dia azo antsoina hoe “agence” izy ireny fa izay moa no hilazany azy. Raha mandeha mankeny amin’iny faritra 67 ha iny ianao dia ahatsiikaritra ireny agence tafo lanitra ireny. Tsy misy birao akory izy ireny fa dia eny amoron-dalana fotsiny.
Ity iray sendra anay dia mpivarotra ravitoto amoron-dalana no manao izany asa izany. Asa, fa toa efa fantatr’ireo vehivavy hitady asa ity toerana ity ka dia maro izy ireo no manatona eny. Dia miandry izay olona mila mpiasa an-trano ireo vehivavy. Msy iamin’izy ireo no tena mbola tanora tokoa, izany hoe eo amin’ny 17 taona, misy ihany koa anefa ireo efa nahazoazo taona kanefa mbola mila miasa noho ny hasarotan’ny fiainana. Amin’ny ankaponeny dia manomboka eo amin’ny 50.000 Ar ny karaman’ireo mpiasa ireo vao manaiky ny hiasa izy ireo. Efa manomboka miavona ireo vehivavy mpiasa an-trano ireo, angamba naheno ny lazan’ny karama noraisin’ireo niasa tany Liban.
Tsy ny Malagasy ihany no mitady mpiasa an-trano eny amin’io toerana io fa na dia ny teratany karana aza dia hitanay teny an-toerana. Tsy dia olana amin’izy ireo ny mandoa izany 50.000 Ar izany na mihoatra fa ny zavatra nipetrahan’ny olona teo amin’ny roa tonta dia ny tsy fihinanana henna-kisoa. Noho io antony io dia tsy nanaiky ny hiasa tamin’ireto karana mivady ilay vehivavy. Marihina fa tsy maintsy mandoa vola 15.000 Ar ho an’ilay karazana agence ilay olona maka mpiasa vao mahazo miala eo an-toerana ny mpiasa. Tsy miantoka izay mety ho toetran’ireo vehivavy mpiasa anefa io agence io fa dia vita hatreo ny anjara asany. Mahaiza misafidy sy mijey tsara raha manatona ireny toerana ireny fa indraindray dia msy olona tsy atokisana mihitsy ireny vehivavy mitady hiasa an-trano ireny.